Iifoto zomculo kunye neemvumi ze-Android yakho | I-Androidsis
Ngaba ufuna ukwenza ngokwakho isikrini sefowuni yakho ye-Android kunye nemvumi oyithandayo okanye iqela? Ngoku kunokwenzeka ngolu khetho lwephephadonga, eneenkwenkwezi zeemvumi kunye namaqela owathandayo. Awuzukuthwala umculo wakho ngawo onke amaxesha, unokuba neefoto ezilungileyo kwifowuni yakho.
Fumanisa kule galari ezona foto zibalaseleyo zamaqela akho owathandayo okanye iimvumi, kumgangatho osemgangathweni, kwaye ukhethe eyona ilungele ifowuni yakho njengephepha lodonga. Ungaphuthelwa nayiphi na kwezi mali!
Ukudityaniswa kwezona zilungileyo umculo neemvumi wallpapers ye-Android yakho. Ngaba ungathanda ukwenza ngokwezifiso i-Android yakho kunye nemvumi oyithandayo okanye iqela? Ewe, apha sikunika ezinye iindlela.
Ukuba awuqinisekanga, nazi ezinye wallpapers for Android simahla.